casino barriere lille drafitra salle
casino barriere lille famandrihan-toerana fampisehoana
Mizrachi nitandrina ny mangatsiatsiaka, sy ny voafantina tsara no mametra ny lalao rehefa nanana ny safidy, favouring tsara ny tactical drafitra izay nampiasaina hatrany ny mpifanandrina ny niisa ny zavatra tokony hatao amin'ny teny poker poti. Stein nahafaty tsara nahazo ny mpihazakazaka ny loka $207,347, raha semi-famaranana Daniel Colman sy Scott Davies dia nahazo $111,942 ny anankiray noho ny fotoana sy ny fahoriana casino barriere lille drafitra salle.
Ny fanafoanana ny Schindler amin'ny fahatelo ho an'ny $212,373 nametraka ny toe-javatra ho lohany amin'ny Ryan Jackonetti milanja 2 1 chip hitarika ny Sean Dempsey, izay nijanona unruffled sy nilalao ny famaizana, canny lalao. Schaff niseho ho nanaiky ny ankapobeny PLO-mirona fomba fiasa, saingy Mizrachi ny tsy misy tetika izay niasa tsara kokoa, ka nanome azy ny chip hitarika ary ny fanatanterahana azy ihany mba handresy ny akaiky-nanohitra ny lalao. Haba sy ny vola ho an'ny Dempsey, Suriano sy Mizrachi Fandaharam-potoana overruns mitaky fanampiny andro kilalao, lalao fahasamihafana sy mafy fifaninanana zavatra mampiavaka ny Tontolo izao Andian-Poker zava-nitranga nandritra ny faran'ny herinandro, amin'ny telo kokoa ny zava-mitranga ao amin'ny boky firaketana sy ny olona an-tapitrisany dolara zaraina mahomby entrants. Bryan Bailey dia mihazakazaka Casinomeister hatramin'ny nanombohana azy tamin ' ny volana jiona 1998 casino barriere lille salle fampisehoana. Ny Master no nanatrika efa ho 100 ny fihaonambe tao anatin'ny 20 taona, ary manana na efa mpandaha-teny na ny tontonana mpandamina farafahakeliny 60 zava-nitranga. Ny loha dia fohy 36-tanana ny raharaha, ary naka fotsiny ny adiny iray mba hamitana, amin'ny Suriano efa ho tanteraka ny fanaraha-maso sy ny vao misondrotra mpandresy taorian'ny nanalavana ny tany am-boalohany dia hitondra any amin'ny 6 1 chip tombony milaza ny $335,553 tena loka ka ny voalohany WSOP fehin-tànana.
Ny lehilahy ny drafitra eto amin'ny Casinomeister. 25 taona Davide Suriano nilaza ny loka voalohany ny $335,553 ary ny voalohany fehin-tànana amin'ny hetsika 40, ny $10,000 buy-tany NLHE fifaninanana tompon-daka izay 136 mpilalao voasoratra, niteraka ny loka farihy $1,198,400. Izany dia nitarika ihany koa ny fandaharam-potoana, miaraka amin'ny manampahefana rehefa handray ny tamin'ny telo mpilalao ho andro fahefatra manapa-kevitra ny mpandresy, noho ny tena kinga sy ny fifaninanana farany ambony latabatra fa ahitana (eo vita order) Sean Dempsey, Ryan Jackonetti Jakôba Schindler, Ryan Olisav, Ryan LaPlante, Nam Le, Layne Resabe, Takashi Yagura sy Andrew Becker casino barriere lille famandrihan-toerana fampisehoana.